Ciidamo ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed oo toogasho lagu dilay - Awdinle Online
Ciidamo ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed oo toogasho lagu dilay
Wararka laga helayo degmada Buurhakaba ee gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegayaan in askari ka tirsan Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed uu dilay askari kale, balse askarigii dilka geystay goobta lagu oogtay.
Dilka Askariga ayaa waxaa la sheegay in uu yimid, kaddib markii askariga la dilay oo lagu Magacaabi jiray Mohamed Ogow uu Qorigiisa u dhiibay askari ay ka wada tirsanaayeen Ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed laakin qorigiisii lagu dilay.
“ Askariga la dilay iyo kan wax dilay saaxiibo ka wada tirsan Ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed ee k sugan Buurhakaba ayay wada ahaayeen, markii la dilay askarigii dilay Ciidamo kale oo u dhowaa ayaa goobta ku dilay ayuu yiri” Qof kamid ah dadka ku nool Buurhakaba.
Meydka labada askari ayaa waxaa goobta ka qaaday Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta maamulka koonfur Galbeed, waxaana la sheegay in uusan jirin khilaaf ka dhaxeeyay askariga dilay askariga kale.
Previous articleGolaha Wasiirada Soomaaliya oo Shir u tegay Hotel ku yaalla Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde
Next articleXisbiga C/raxmaan C/Shakuur oo walaac ka muujiyay Arrimaha doorashooyinka